Intetho Eyenziwe Ngusekela-Mphathiswa Wezobugcisa Nenkcubeko Kuzwelonke, Ntombazana Botha Ngomhla Wokupapashwa Kwesichazi-Magama I-Greater Dictionary Of Isixhosa. | Department Of Arts and Culture
Inkqubo eneengongoma ezili-10 eyathi yamkelwa kule nkomfa isichaza esi siMemezelo kakuhle Ndingathanda ukuba sikhe siphinde sikhumbuzane kwakhona ngezi ngongoma:
Iilwimi zamaAfrika kufuneka zithwale uxanduva nomsebenzi wokuthethela iAfrika nokuthetha egameni layo.
Ukwahluka-hlukana nokulingana kweelwimi zesiNtu/zabantu kufuneka zaziwe/zivunywe njengesiseko sophuhliso nokuxhotyiswa kwabantu baseAfrika kwixesha elizayo.
Ukwahluka-hlukana kweelwimi zesiNtu kubonakalisa ubutyebi belifa eliyinkcubeko yaseAfrika, kwaye ke oku kwahluka-hlukana makusetyenziswe njengesixhobo sobumbano lweAfrika.
Uthetha-thethwano phakathi kweeLwimi zesiNtu kubalulekile: ngoko ke iiLwimi zesiNtu mazisebenzise utoliko kunye nophuhliso lwesigama ukuphuhlisa unxibelelwano phakathi kwabantu bonke, kubandakanya nabo bakhubazekileyo.
Bonke abantwana bamaAfrika banelungelo elingangxengwanga lokuba bahambe isikolo baze bafunde ngeelwimi zakwamakwabo. Ngoko ke makwenziwe unako nako wokuba kuphuhliswe iiLwimi zamaAfrika kuzo zonke izigaba zemfundo.
Ubhengezo lophando kwiiLwimi zamaAfrika kubaluleke kakhulu kuphuhliso lwezi lwimi, kananjalo, inkqubela-phambili yophando ngezase-Afrika nokushicilelwa kwazo/nokubhalwa kwazo phantsi kungalulutho ukuba ngaba kuthe kwasetyenziswa iilwimi zamaAfrika.
Ukuphuhla nokwanda okukhawulezileyo kwenzululwazi nobugcisa eAfrika kuxhomekeke ekusetyenzisweni kweelwimi zamaAfrika, kwaye ke ubugcisa bale mihla kufuneka busetyenziswe kuphuhliso lweLwimi zamaAfrika.
Ulawulo lwentando yesininzi (democracy) lubalulekile kuphuhliso olulinganayo lweeLwimi zamaAfrika, kananjalo iiLwimi zamaAfrika zibalulekile ekuphuhliseni ulawulo lwentando yesininzi, olusekelwe kulingano kunye nobulungisa kwezentlalo.
Iilwimi zesiNtu, njengazo zonke iilwimi, zinocalu-calula ngokwesini. Indima yeelwimi zesiNtu kuphuhliso kufuneka iloyise olu calu-calulo ngokwesini ukuze kubekho ukulingana ngokwesini.
IiLwimi zamaAfrika zibalulekile ekukhululeni iingqondo zamaAfrika kuxinzelelo nobukhoboka bengqondo yamaAfrika, kwakunye nokuvuselela iAfrika.
Ngaphandle kwamathandabuzo siyakhahlela kwiZiko lesiZwe lesiChazi-magama sesiXhosa ngalo msebenzi bawenzileyo mkhulu kangaka, sibamba ngazibini kulo mzi wesiChazi-Magama ngokuthi bawugqibe lo msebenzi, nto leyo engamaqalela ekufezekiseni iinjongo zesiMemezelo sase-Asmara.
Izifundo ngobhalo lwezichazi-magama yinto entsha kwiiLwimi zesiNtu. Ndifuna ukuthi ukushicilelwa kuyinxalenye yomsebenzi wokuhlahla indlela kubhalo lwezichazi-magama kwiiLwimi zamaAfrika. Ubude bexesha elithe lathatyathwa ukwenza nokugqiba ukubhala zontathu ezi ncwadi zeGDX, bububungqina obucacileyo beenzame namatile-tile ukungqinisisa ukuba ingcaciso nemizekelo enikiweyo kwisichazi-magama yechanekileyo. Ixesha elichithiweyo kusenziwa uphando ngamagama nezinto-yinto zenkcubeko yamaXhosa, kubonisa ngokuselubala ukuba uphando yeyona nto ibe ngundoqo kwesi sichazi-magama. Ndiye ndaqinisekiswa ukuba uphando oluninzi olwenziweyo belusenziwa ngokuthi kubuzwe iintsingiselo zamagama kubantu abahlala ezilalini kulo lonke eli laseMpuma-Koloni, ukususela kwingqingi yaPhesheya kweNciba ukuza kuthi xhaxhe kweli loMneno-Nciba, nakuzo zonke iziphaluka ekuthethwa kuzo isiXhosa. Indlela esakhiwe ngayo esi sichazi-magama esinamahlelo amathathu, elesiXhosa, elesiNgesi kunye nelesiBhulu, yenobugcisa balamaxesha, obuhamelanayo neendlela zokubhala izichazi-magama zalamaxesha. UNjingalwazi Gouws kwelinye lamanqaku akhe, kweli lithi Idioms and Collocations in Bilingual Dictionaries and their Afrikaans Translation Equivalents, ucacisa ngokuselubala ukuba izaci namaqhalo kufuneka zibe yinxalenye yezichazi-magama, kwaye kufuneka zifakwe kwizichazi-magama ngendlela enobugcisa ngokulandelelana okufanelekileyo. Kwesi sichazi-magama sesiXhosa oku kwenziwe kakuhle, aza onke amagama ayinxalenye yesaci akhombisa ezinye iindawo kwalapha kwisichazi-magama ekuchazwe kuzo isaci okanye iqhalo elo. Zonke ke ezi zinto, manene nani manenekazi, zibonakalisa ubunono nezinga eliphakamileyo lesi sichazi-magama esilazisayo kuluntu luphela namhlanje.
UWiegand (omnye wababhali kwezezichazi-magama) (1989:251) uye waphawula ukuba izifundo zezichazi-magama (lexicography) yindlela yokwenza nokubhala izichazi-magama ukwenzela ukuba kubekho isiko lokusetyenziswa kwazo. Kananjalo, ababhali abaninzi ababhala ngezichazi-magama baye baphawula kule minyaka igqithileyo, ukuba kubalulekile ukuba abo benza/babhala ngezichazi-magama banonophele into yokuba izichazi-magama abazibhalayo zinakho ukusetyenziswa luluntu. Ukuze ke kuveliswe izichazi-magama ezinokusetyenziswa luluntu kufuneka ababhali aba bazazi iimfuno zoluntu, kwaye ezo mfuno zoluntu zibe kanti ziphandiwe ngokwaneleyo. Ndinethemba lokuba ke ngenxa yokubandakanyeka koluntu, iminyaka ngeminyaka, kubhalo lwesi isichazi-magama sesiXhosa, iimfuno zoluntu ziye zaqwalaselwa, ngoko ke esi sichazi-magama siya kuthi sisetyenziswe size sibe lulutho eluntwini jikelele.
UPHUHLISO LOBHALO KUNYE NOMZABALAZO WENKULULEKO
Imbali yokuqala kobhalo noluncwadi kwiilwimi zesiNtu likumaxesha awohlukeneyo kwimbali yoMzantsi Afrika. Ixesha loncwadi lwemveli (traditional literature) libonakala ngathi ibe ilixesha elinika udla, liphilile kwaye lisonelisa kuphuhliso loncwadi. Kwizifundo zakhe zobuGqirha (PhD), okaZotwana uphawule ukuba eli xesha lalilungile kuba lalinazo zonke izinto ezifunyanwayo kuluncwadi, ezizezi:
Iintshisekelo zesizwe zokuseka uzinzo
Ukuqwalasela imbali yoluntu
Ukubhiyozelwa kwempumelelo, ukuncoma okulungileyo kuluntu, kunye nokuba nesibindi sokugxeka imikhuba emibi kuluntu
Kunye nokuphakamisa nokukhusela amalungelo oluntu.
Ixesha elathi lalandela elo loluncwadi lemveli, yaba lixesha labefundisi beLizwi ababevela phesheya (missionaries) kunye nabo bafika bahlala kweli lizwe (settlers), ixesha leelwimi kunye noluncwadi lwale mihla (modern languages and literature) - xesha elo lalahluke mpela kwelo langaphambili. OkaZotwana uxoxa athi ixesha loncwadi kunye neelwimi zale mihla lasuka lazi thintela iingcamango nemibono emihle yexesha loncwadi lwemveli, kwaye laphakamisa uncwadi olunxamnye lukhabana neentshisekelo zesizwe samaXhosa, kuba lalifuna ukwanelisa iimfuno zeBhritani. Kaloku, ushishino loncwadi kunye nezindlu zokupapasha zaziphethwe ngabamhlophe (kuba kusenjalo nanamhla oku), Izimvo kunye neentshisekelo kuncwadi loluNtu zala maxesha zibonisa ezo zabacinezeli. Ii-Steward Readers ziincwadi ezingumzekelo woluhlobo loncwadi. Eli xesha lalidume ngemibhalo yenkolo, uguqulo lweBhayibhile, iincwadi zamaculo enkolo, kunye namanye amabali aluhlobo lwenkolo. Ngaloo ndlela, uncwadi olwavezwa ngeelwimi zesiNtu lwalunenjongo ethile endaweni yokuba ligxininise ekubeni konwatywele uncwadi ngokobuhle balo. Eyona njongo ibingundoqo yoluncwadi lweli xesha, yayikukwenza abantu abaNtsundu abalandeli babo.
Ixesha localu-calulo elalandela eli layenza mandundu ngakumbi imeko, laza layenza nzima ngakumbi imeko kuncwadi lweelwimi zesiNtu. Ayimangalisi ke ngoko ke into yokuba uncwadi oluchasa ingcinezelo ngexesha lolawulo lweBhritani eMzantsi Afrika, nangexesha localu-calulo lwaphuhla kuba luzama ukulwa nentshabalaliso yoluncwadi kwiilwimi zesiNtu. Uncwadi oluchase ingcinezelo kwakufuneka lube nobugcisa kwaye lube nengqiqo kwiinzame zokunyusa umgangatho wokuqonda nokuvula uluntu amehlo kwezentlalo-ntle nezopolitiko, kungenjalo abo babhali babeza kujongana nogonyamelo nentshutshiso engathethekiyo. Phofu ke abaninzi baya bahlangana nolo gonyamelo olwalubangelwa yinkohlakalo yorhulumente welo xesha.
Nangona kunjalo, uncwadi lwabaNtsundu lwalusetyenziswa njengesixhobo esitshetsha phantsi, esichasa ucalulo kunye nezinye iintlobo zengcinezelo. Kodwa ke, ukuze abaphathi bangakhawulezi bayiqonde intsingiselo yoncwadi, ababhali kwakufuneka besebenzise izafobe, izangotshe, izikweko kunye nofaniso ukugquka umkhondo, nokufihla intsingiselo, nokubaleka ingqumbo yabacinezeli. Ukucengceleza imizekelo embalwa evela kuncwadi lwesiXhosa olwaluchasa ingcinezelo kule nkulungwane yamashumi amabini yeminyaka:
Umbongo oyindumasi wembongi edumileyo yamaXhosa, iMbongi Yesizwe, oka- Mqhayi, othi: “AA! Zweliyazuza! ITshawe laseBhritani” ungqinela olu luvo. Kulo mbongo uyindumasi uMqhayi uhlasela iBhritani eNkulu (Great Britain) ngokubhunyula i-Afrika, yenziwa ikheswa, nto leyo ke ikhokelele kubunzima nentlupheko yamaAfrika. Le nto ke uMqhayi uyenza kakuhle, uyigquma ngezaci nangezafobe, uluma evuthela ukuze ingabonakali eyona njongo yakhe:
“Hay’ kodw’ iBhritan’ eNkulu,-
Tarhu bawo, sive yiphi na?
Gqithela phambili Thole lesilo!
UMqhayi uphawula izinto ezingangqinelaniyo ezaziswa yiBhrithani (Great Britain) kubantu abaNtsundu, phofu eyona nyani ikukuba ngoku iBhrithani ijike yaba “yindlalifa” nomxhamli kubutyebi kunye noovimba babantu abaNtsundu, “Ndlalifa yelakowethu!”
Omnye umzekelo libali elibhalwe ngokaSiyongwana, “Ubulumko Bezinja”, ifana ncamashiyane nencwadi i-“Animal Farm” ebhalwe ngoka-Owell. OkaSiyongwana umemezela abantu abaNtsundu ukuba bavukele abacinezeli babo. Uyenza le nto ngokusebenzisa antwise izinja (azenze izinja zithethe kwaye zicinge njengabantu), imfaniso yezinja ezivukela abacinezeli bazo abangabantu. Ibali liphela ngokuxolelana kwamacala amabini, izinja kunye nabantu, behlangana kunye kwaye bethetha-thethana ngekamva labo. Nangona eli bali labhalwa kwishumi leminyaka eladlulayo phambi kothetha-thethwano lwaseMzantsi Afrika, kambe lithe laprofetha ngokuchanekileyo xa uqwalasela ingukuqo ezithe zenzeka kwezopolitiko eMzantsi Afrika kule minyaka ukususela kunyaka we 1990 (kunyaka wewaka elinamakhulu alithoba anamashumi alithoba).
Mininzi neminye imizekelo elolu hlobo loncwadi loqhankqalazo esiye sahlangana nayo kwiminyaka embalwa edlulileyo. Singatsho ke ngokuphandle, nangaphandle kwentandabuzo, ukuba uncwadi lwesiNtu, ingakumbi imibongo namabali, luye laba yintsusa-mabandla yomzabalazo phakathi kogonyamelo nokuzikhulula kwingcinezelo; phakathi kwabacinezeli nabacinezelwa; naphakathi kokubi nokulungileyo. Nangona namhlanje siyifumene inkululeko yethu, isekhona imfuneko yokukhuselwa kwesidima sabantu abaNtsundu.
I-GREATER DICTIONARY OF ISIXHOSA KUNYE NEMICELI-MNGENI
Isichazi-magama esaziswayo namhlanje, ngenjongo yokulungelelanisa umgangatho welwimi lwesiXhosa, siyakudlala indima enkulu ekuqinisekiseni ukukhuselwa kwesidima sabantu abaNtsundu. Kuthabathe phantse iminyaka engama-40 ukugqiba imiqulu emithathu ye-Greater Dictionary of isiXhosa (GDX), ukusukela phakathikwinkulungwane yamashumi amabini ukuya kwiminyaka yokuqala yenkulungwane yamashumi amabini ananye. Iminyaka emininzi yokubulaleka nokusebenza phantsi kweemeko ezinzima ekugqibeleni ize nomvuzo, njengoko namhlanje singqina iziqhamo zomsebenzi wezandla zethu kule minyaka mininzi. Ndiye ndaxelelwa ukuba abanye abantu abafaka isandla kakhulu kulo msebenzi wokubhala esi sichazi-magama sele besandulele. Aba bantu babandakanya okaNdungane, okaFihla, uNkosi Burns-Ncamashe, uMfundisi Pienaar, kwakunye noNjingalwazi Pahl, oyena mhleli oyintloko wokuqala we-GDX. Yanga imiphefumlo yabo ingaphumla ngoxolo.
I-GDX iqulathe ubutyebi kunye nelifa lenkcubeko yabantu abaNtsundu, ingakumbi, abantetho isisiXhosa. Kambe ukulondolozwa kweli lifa lenkcubeko yamaXhosa akutyebisi kuphela abantu baseMpuma-Koloni, kodwa kutyebisa abantu belizwe loMzantsi Afrika liphela. Ngoko ke yindyebo yesizwe le, apho izizukulwana ngezizukulwana ziya kuxhamla kuyo naphakade.
Ukubhalwa kwesichazi-magama kudala izakhiwo zeelwimi ezifuneka kakhulu nezinexabiso elikhulu ekusetyenzisweni komgaqo-nkqubo yeeLwimi zesizwe (National Language Policy). Kusuloko kukho izikhalazo ezimalunga nokunqongophala kwesigama sobugcisa (technical vocabulary) kwiilwimi zemveli, kunye nokungabi nakho ukusebenziseka kweelwimi zemveli kunxibelelwano olukwinqanaba eliphezulu. Sinethemba lokuba ngokupapashwa kwesi sichazi-magama, zonke ezi zikhalazo zizakuphele, kuba abantu baya kuba nako ukusebenzisa isiXhosa ukuthetha ngezona zicatshulwa nezimvo neengongoma ezinzulu nezinzima ngoncedo lwesisichazi-magama. Iziphatha-mandla zemfundo kunye nabantwana besikolo kufuneka bakhuthazwe ukuba basebenzise esi sichazi-magama, kuba siqulathe iintsingiselo zakudala nezintsha zamagama. Umzekelo, igama elifana neli lithi: “iqabane” eli ntsingiselo yalo isukela kwintsingiselo yakudala, elithe ngoku lazuza ezinye iintsingiselo, lingumzekelo womgangatho ophezulu wesi sichazi-magama. Umceli-mngeni esijongene nawo namhlanje kukungaziqhelisi kwabantu bethu ukusebenzisa isichazi-magama. Yinto ekufuneka siyimilisele kubantwana bethu nakubantu abatsha ukwenzela ukuba ixabiso lolwimi liqondwe kwaye lixatyiswe libukwe ngokusebenzisa isichazi-magama roqo.
Mandinazise kananjalo ukuba iSebe lethu Lobugcisa Nenkcubeko Kuzwelonke linengqokelela yesigama sobugcisa esiphuhliswe ngokuhlanganyelana nabathelelani belwimi kunye neeyunivesiti kuMzantsi Afrika. Ezi zigama zifumaneka ngeelwimi ezili-11 ezivunyiweyo phantsi komgaqo-siseko, kwizifundo ezahlukeneyo. Sekukho imizamo yokuba zifumaneke zibe nokuhlolwa ngabathelelani abafanelekileyo kunye nabasebenzi ngeelwimi zisendleleni, kumnatha osetyenziswa kwikhompyutha (web).
Omnye wemiceli-mngeni engundoqo ojongene nomgaqo-nkqubo weelwimi ezininzi (multilingual policy) ngulo wokuba ingaba ukuphakamisa kwethu izinga leelwimi zethu ezininzi zaseMzantsi Afrika akukhabani na nokwakha ubunye, nesizwe esinye? Asiziphakamisi ezi lwimi phantsi komngcipheko wokohlula uluntu loMzantsi Afrika kunye nokutyala imbewu yobuhlanga kunye nogonyamelo lwenkcubeko phakathi kwamaqela ngamaqela eenkcubeko ezahlukileyo eMzantsi Afrika? Nakanye! Ukuphakanyiswa nokuphuhliswa kweelwimi ezininzi zoMzantsi Afrika, kufuneka kuqwalaselwe njengenye yeemfuneko zelizwe elizikhethele ulawulo lwentando yesininzi. Kufuneka kubonwe njengendlela yokomeleza olu lawulo lwentando yesininzi njengoko ukwahluka-hlukana kwethu ngokwenkcubeko kubandakanya neelwimi zemveli zoMzantsi Afrika.
Ngaphezu koko, urhulumente angathanda ukukhuthaza nokuphakamisa iilwimi ezininzi ezinokusetyenziswa ukuze baxhamle abantu baseMzantsi Afrika abathetha iilwimi ezahlukeneyo. Kutsha nje, ngonyaka wamawaka amabini ananye (2001), uphando lubonise ukuba bamalunga namashumi amabini anambini ekhulwini (22%) abantu baseMzantsi Afrika abakwaziyo ukulusebenzisa ngokugqibeleleyo ulwimi lwesiNgesi, naxa abantu abaninzi besithi bayalwazi yaye bayaluthanda olu lwimi lukaKumkani u-George. Lo nto ithetha ukuthi ngabantu aba ngamashumi asixhenxe anesibhozo ekhulwini (78%) abo bangakwaziyo ngokupheleleyo ukusebenzisa ulwimi lwesiNgesi. Iilwimi zemveli ezahlukeneyo ziya kubanceda kakhulu ekuqinisekiseni ukuba banxibelelana ngokufezekileyo, oku kube ke kuphucula iimpilo zabo ekugqibeleni. Kubaluleke kakhulu ukuba iilwimi zemveli ziphuhliswe, zikhuliswe kwaye zisetyenziswe kakuhle. Iilwimi ezininzi zingumthombo wokunceda abantu bethu.
Omnye umceli-mngeni ojongene noMzantsi Afrika namhlanje yinkqubo yezikolo kwezeelwimi. Zingasetyenziswa njani iilwimi ezilishumi elinanye (11) ezivunyiweyo phantsi komgaqo-siseko kwinkqubo yezikolo? Uphando lubonise ukuba abantwana abafundiswa ngolwimi lwabo lwasekhaya ubuncinane beminyaka mithandathu ubudala (6) kwimfundo yabo yamabanga aphantsi, banethuba elikhulu lokuba ngabafundi abaphumelelayo kunabo bangakhange babe nalo elo thuba. Ngoku kukho imvumelwano yokuba ukufundiswa ngolwimi lwasekhaya kudityaniswe nolunye ulwimi kunceda kakhulu, ingakumbi kubantwana abasakhulayo.
Izifundiswa ezifana nokaBokamba (Arguments for Multilingual Policies in Africa) zibonisa ukuba iilwimi zabaNtsundu zimele okuxabiseke kakhulu ekufuneka kutyalwe ngokupheleleyo kuzo zonke inkalo zentetho, nobhalo, ukuze i-Afrika ingalahlekelwa zezi lwimi kunye neenkcubeko zazo. Lo mfo ubuya athi:
“Ukusetyenziswa kwezo lwimi zabacinezeli ekufundiseni ezikolweni nasekulawuleni abantu beli lizwe akunasiqhamo sihle kwezemfundo nakuphuhliso lwezentlalo-ntle.”
OkaBokamba ukholelwa ekubeni imigaqo-nkqubo yeelwimi ezininzi, ebandakanya iilwimi zabaNtsundu kunye neelwimi zaseYurophu, (isiNgesi ukutsho apha kweli lizwe), ayibizi kakhulu ekuhambeni kwexesha xa kuthelekiswa inkcitho-mali naxa amanye amazwe ase-Afrika eyiphikisa lo nto.
Kwimeko yaseMzantsi Afrika, izimvo zikaBokamba seziqalile ukusetyenziswa. Umzekelo: IPhondo leNtshona Koloni kutsha nje lisanda kupapasha umgaqo-nkqubo wokufundisa apho kusetyenziswa iilwimi ezimbini, ulwimi lwenkobe kunye nolunye ulwimi.
Kucacile ukuba le ndlela kusafuneka ikhe iphandwe ngononophelo. Mhlawumbi ingakulungela ukusetyenziswe ngamanye amaphondo, ethabathela ingqalelo iimeko zawo.
Icacile yona into yokuba ukuba sithe saqala ukufundisa abantwana bethu ngokubaluleka kweelwimi zethu, baya kufunda ukuba nentlonipho ngeelwimi zabo baze kananjalo bangazijongeli phantsi iilwimi kunye nenkcubeko yezinye izizwe. Loo nto ke iya kuqinisekisa ukuba ikamva lethu apha eMzantsi Afrika libe leliqaqambileyo. Ikhona intetho yesiXhosa ethi “Bagotywa bebatsha!” Masibaqeqeshe, sibafundise abantwana ngenkcubeko yethu ngeli xesha besebatsha besakwazi ukululekwa.
Ezopolitiko yenye yeenkalo ekufuneka umgaqo-nkqubo wesiZwe weeLwimi (National Language Policy Framework) uyibazele iliso. Abezopolitiko, abameli babantu kwizindlu zowiso-mthetho kunye namagosa aphezulu eburhulumenteni kufuneka beliqondile ixabiso lweelwimi zesiNtu. Kaloku aba bantu banakho ukwenza ifuthe elimandla ekuguquleni indlela ezijongwa ngayo iilwimi zethu, ukuze zingajongelwa phantsi. Ngabo amabazisebenzise baze kananjalo basebenzise ubuxhaka-xhaka bokuguqulela kwezinye iilwimi kwizindlu zowiso-mthetho, kumasebe aseburhulumenteni, nakuzo zonke ezinye iindawo apho urhulumente ahlangana khona noluntu.
Enye indawo efuna ingqwalasela yabo bajongene nophuhliso lweeLwimi zesiNtu, yindlela ekubhalwa ngayo imithetho yaseMzantsi Afrika. Umzekelo, imithetho yethu ibhalwa ngesiNgesi ize iguqulelwe kwezinye iilwimi ezivunyiweyo phantsi komgaqo-siseko. Amaxesha amaninzi ezi nguqulelo zomthetho (translated versions) azizithabatheli ngqalelo iimeko zasekuhlaleni kunye nenkcubeko yabantu abachatshazelwa yile mithetho. Okubaluleke kakhulu, aba bantu baguqula le mithetho ngabantu abaziingcali kwiilwimi, ayingobantu abafundele ezomthetho. Oku ke kudala iingxaki ezininzi, njengoko ezi ngcali kwezeelwimi ziye zingabi naso isakhono sokuguqulela le mithetho kwezinye iilwimi ngokuchanekileyo. Umbuzo ekufuneka sizibuze wona ngulo: Kutheni le nto singenakho thina ukusebenzisa iilwimi zesiNtu, njengesiXhosa, ukubhala imithetho yethu? Kutheni nje iilwimi zesiNtu zingenakusetyenziswa kwezomthetho, apho imithetho ibhalwa ngeelwimi zesiNtu, iinkundla zamatyala zixoxe amatyala ngeelwimi zesiNtu, zize nezigwebo ziwiswe ngeelwimi zesiNtu?
Ubukho besi sichazi-magama esikumgangatho ophezulu njenge-GDX, buya kudlala indima enkulu ekusombululeni ezinye zezi ngxaki endithethe ngazo namhlanje. Ndiqinisekile ukuba njengoko siya siphuhlisa iilwimi zesiNtu ezifana nesiXhosa ngalamalinge siwenzayo okubhala izichazi-magama, kwakunye nezinye iintshukumo zikarhulumente, amaziko emfundo ephakamileyo noluntu jikelele, siyakuba nako ukukhusela isidima nesithozela somntu omnyama, kwaye ekugqibeleni siya kuphila ubomi obusifaneleyo njengabantu bomthonyama.
Okokugqibela ndicela ukuphinda ndivuyisane neYunivesiti yase-Fort Hare, amagosa eZiko lesiChazi-magama sesiXhosa, amalungu eBhodi yabaLawuli aphethe eli Ziko, iBhodi yeeLwimi zonke zoMzantsi Afrika (Pan South African Language Board), uRhulumente wePhondo noweZwelonke ngomsebenzi kunye nomzamo omhle kangaka abawenzileyo ukuqinisekisa impumelelo ye-GDX.
Urhulumente wethu, ingakumbi iSebe lethu njengeSebe elikhokelayo kuphuhliso nophunyezo lomgaqo-nkqubo weelwimi, lizibophelele kwinkqubo yeelwimi ezininzi (multilingualism). Izakhiwo ezikhoyo zesizwe esele iziqalile ezifana namaZiko oPhando noPhuhliso lweeLwimi, (linye ngoLwimi lwesiNtu ngalunye) ngalunye olusemthethweni, inkonzo zokuguqulela kwezinye iilwimi kusetyeziswa umnxeba kweli loMzantsi Afrika (Telephone Interpreting Service for South Africa) (TISSA), ubuChwepheshe beeLwimi zoluNtu (Human Language Technologies) (HLT), I-Arhente yoGuqulo, iBhunga labaSebenzi ngeeLwimi loMzantsi Afrika elicingwayo –ndibala ntoni na - konke oko ngamanyathelo acacileyo angqina ukuzinikezela kwethu kuphuhliso lweelwimi zabantu baseMzantsi Afrika.
I-GDX mayenziwe ukuba ifumaneke kuwo onke amasebe karhulumente kwiPhondo naseNtshona Koloni, nakuwo onke amasebe obuGcisa neNkcubeko, kwizindlu zowiso-mthetho, emaphondweni naseKapa.
Ekuyaziseni i-GDX namhlanje singa singabakhuthaza nabanye abantu ukuba bayisebenzise bayazise ngokunjalo kuluntu luphela.
Ndibulela le nyhweba yokuba ndazise ukupapashwa kwe Greater Dictionary of IsiXhosa!
Ndithi maz’enethole kuni nonke!!!